တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃး ဘဲ, လုၣ်, ဒီးတၢ်ထါတၢ်လၢဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်
news The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019 (1 year ago )
တၢ်ထါတၢ်ဒီး တၢ်စုသ့ခီၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိကၠိလၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်လိယံာ်တနံၣ် ဘၣ်ဃးဘဲ ဒီးလုၣ်, ဒီးတၢ်သိၣ် လိယံာ်ဃုလါဘၣ်ဃး တၢ်ထါတၢ်လီၤ. ဘဲဒီးလုၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအိၣ် ၂၀ ဖျၢၣ်, ဒီးတၢ်ထါတၢ်အ ဂီၢ် လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအိၣ် ၁၀ ဖျၢၣ် လီၤ. ပှၤထီၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကိၣ်ပှ့ၤတလါ ၃...
“အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ်လုပ်ငန်း ဖြေလျော့မှု စမ်းသပ်စီမံကိန်း စတင်
news Myanmar Times, 29 May 2019 (1 year ago )
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်လုပ်သားများနှင့်အလုပ်ရှင်များ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုရရှိစေရန်အတွက် လူမှုလုံခြုံရေးငွေပေးချေမှုစနစ်ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ စနစ်သစ်ကို ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းရှိ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တို့တွင် စမ်းသပ်...
Ygn Gov’t Forms Investigation Team to Solve Land Dispute
news Eleven Myanmar, 29 May 2019 (1 year ago )
YANGON- Yangon Region Government Committee had formedaSpecial Investigation Team to solve land confiscation cases of Ngwe Pin Le Dry Port Project to be implemented by Yangon Metropolitan Company. This information comes from MP Kyaw Zeya from No.2 Constituency of Dagon Township who is also the ...
The Labour Ministry has streamlined the process of making social security payments inabid to better serve registered workers and employers, said the head of the Ministry of Labour, Immigration and Population. The new system is being tested in Hlaing Tharyar Township in Yangon Region and Pyigyi...
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လယ်ယာမြေအမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည်
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လယ်ယာမြေအမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း မေ ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု အသင်းချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ တော်ဒုတိယ သမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေနှင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပုံ...
ဝ့ၢ်တကူၣ်ပဒိၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါကရူၢ် လၢကဘှါၡဲဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်
ဝ့ၢ်တကူၣ် - ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ်ကမံးတံာ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါကရူၢ်လီၤဆီ လၢကဘှါၡဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ငွ့ၤပ့ၤ လဲၤ သန့ဃ့ထီတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤထွဲထီၣ်အီၤလၢ ဝ့ၢ်တကူၣ်ဝ့ၢ်ဂ့ၢ်ဝီခီပနံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဝဲအံၤဟဲလၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ကၠီၣ်စ့ၤယၤ လၢနီၣ်ဂံၢ် (၂) တၢ်ဖးဟီၣ်ကဝီၤ တက...
ပဒိၣ်စးထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အကျိၤအကွာ်အသီ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂီၢ်
ပှၤမၤတၢ်ဖိကိတိာ် မၤဘၣ်လီၤပလိာ်က့ၤ ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အကျဲ ဒ်သိးကမၤဘျုးဂ့ၤထီၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤ ကစၢ်လၢအမံၤဆဲး လီၤအသးတဖၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်စရီကိတိာ်, စံးဝဲလီၤ. တၢ်အကျိၤအကွာ်သီဝဲအံၤ တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢ လဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ် ဆၣ် လၢဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် ...
သမ္မတမှ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြား
news Myanmar Times, 28 May 2019 (1 year ago )
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ၊ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နေပြည်တော် ကောင်စီ၊ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး ဇမ္ဗူသီရိခန်းမ၌ တွေ့ဆုံပြီး လမ်းညွှန် အမှာစကားပြောကြာ...
President Urges Faster Reforms to Build Federal Union
Officials in the legislative, executive and judicial branches of government need to speed up reforms to buildafederal union, President U Win Myint said. He made the comment inameeting with senior staff of government agencies, legislators and judicial officials last week to underscore the need...
ကီၢ်ခိၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကမၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်
ခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, တၢ်ပၢတၢ်ြပး, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်မီတ့ ပဒိၣ်အဒ့ြတၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီ ဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်, အဂ့ၢ် ကီၢ်ခိၣ်အူဝ့မၠ့ၣ် စံးဝဲလီၤ. အဝဲကတိၤတၢ်ဝဲအံၤ ဖဲအထံၣ်လိာ်သးဒီးခိၣ်နၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢပဒိၣ်ဒ့ြတၢ်လၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးတၢ်စံ...